रोचक : आजको मूल्यमा एउटा 'गोल्ड मेडल'लाई पगाल्यो भने कति मूल्यको हुन्छ ? - Himali Patrika
रोचक : आजको मूल्यमा एउटा ‘गोल्ड मेडल’लाई पगाल्यो भने कति मूल्यको हुन्छ ?
हिमाली पत्रिका २३ साउन २०७८, 10:01 am
ओलम्पिक मेडलका डिजाइन हरेकचोटी फरक बनाइएका हुन्छन् । गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्ज सबैको ‘डाएमिटर’ ८५ मिलिमिटरको हुन्छ भने यसको मोटाइ ७.७ एमएम देखि १२.१ एमएमसम्मको हुन्छ । गोल्ड मेडल वास्तवमा सुनको जलप लगाइएको शुद्ध चाँदिले बनाइएको हुन्छ । यसको कूल तौल ५५६ ग्राममा ६ ग्राम सुन हुन्छ ।